Somalida iyo siyaasada | Africa Times
Somalida iyo siyaasada
ASTAAMAHA SIYAASIGA SOOMAALIGA AH EE MAANTA JIRAA WAA KUWAN BY HAYAAN CABDISALAAN ISMAACIIL [Mudugonline, 9 Jan 2002]
Waxaan marar badan isweydiiyaa maxaa siyaasiyiinta soomaaliyeed ka qaldan? Waxaan arkaa dad badan oo soomaaliyeed oo rayigooda ka dhiibta siyaasada iyo siyaasiyiintaba. Marka hore waxaa isweydiin leh waa maxay siyaasadu? Waxaan
anigu qabaa in siyaasadu tahay tartan, tartankaasoo ka dhaxeeya kooxo kala duwan. Kooxahaas oo ku tartamaya codka bulshada ay ku dhexnool yihiin, kooxahaas oo aaminsan in mabda´ ooda uu yahay kii bulshadu ku gaari laheyd horumar. Hadaba markii doorasho laga sameeyo wadanka waxaa guuleysta kooxdii shacbiga badankiisii soo jiidatay. Taas micnaheedu wuxuu yahay inta u dhaxeysa labo doorasho waxaa wadankii lagu fulinayaa mabda´a kooxdii ku guuleysatay doorashada, kuwii lagu guuleystayna waxay noqonayan mucaarad iyagoo dhowraya sharciga uyaala wadanka, tixgalinaya kooxda haysa maamulka wadanka. Sida cinwaanka maqaalkan ku tilmaaman, dad badan oo soomaaliyeedna ay maqaalo ka qoreen waxaa marar badan isweydiiyey siyaasiga soomaaliyeed ee maanta jiraa waa kuma? Hadaba calaamadaha lagu garto siyaasiga soomaaliyeed waqtigaan xaadirka ayaan xoogaa dib u fiirshay waxaana iisoo baxay:
SIYAASIGA SOOMAALIGA AH EE MAANTA JIRAA WAA KAN.
Waa nin da weyn (Ilaahaa weyn).
Wuxuu ku dhashay tuulo ama magaalo ay inta badan degaan reerka uu ka soo jeedo sidaa daraadeed wuxuu noloshashiisii inta hore uu kusoo dhexjiray hal reer oo kaliya ah wuxuuna dhalinyaranimadiisii yimid magaalo weyn.
Reerkiisa, xaaskiisa iyo caruurtiisa waxay badanaa joogaan waddamada Yurub ama waqooyiga Ameerika. Hadii xaalada nabadgelyo ama tan caafimaad ku xumaato si fudud ayuu u tagi karaa waddamadaas, maxaa yeelay wuxuu inta badan haystaa dhalashadooda ama sharciga lagu joogo.
Wuxuu badanaa heystaa darajo askareed sida Korneel, Gaashaanlesare, jeneraal, sareeye gaas, sareeye guuto iwm. Masoo baran inta badan waxbarashada cilmiga diinta, siyaasada, maamulka, bulshada, sharciga, dhaqaalaha ama sayniska. Laakiin wuxuu si wanaagsan uga soo qalanjabiyey kuliyadii qayaamada iyo dhaca ee xukuumadii Siyaad Barre. Markii jagada loo
magacaabayey wuxuu shaxaadi jiray masruufka reerka, lix bilood kadib wuxuu lahaa 4 gaari 3 guri dhowr boqol kun oo doolar iyo beer ku taala Afgooye banaankeeda.
Wuxuu badana kasoo shaqeeyey dowladihii soomaaliyeed ee soo jiray intii xornimada la qaatay kadib. Inta badan wuxuu lasoo shaqeeyey dowladii Siyaad Barre oo uu kasoo qabtay jagooyin kala duwan. Waxaa marar qaarkood dhacday
inuu fakaday oo mucaarad ku noqday xukunkii Siyaad Barre, haddana uu soo laabtay kadib markii jago ka wanaagsan tii hore ama nolol ka wanaagsan tii hore loo balanqaaday.
Sicirbararka ma saameyn oo kaliya dhaqaalihii ee siyaasadiina wuu gaaray. Markii ay meel uga banaanaan weysay ururadii jiray wuxuu uruursaday xoogaa dad laftiisa kadhashay oo war qalada ah laga dhaadhiciyey wuxuuna sameystay ururka SBTJ oo matala reer XKHD.
Mabda siyaasadeed,qorsho siyaasadeed, xal siyaasadeed midna malaha mana wato ee wuxuu hadba raacaa meeshii abeeshu usocoto. Haddii uu shalay cadow ku ahaa koox kale, maanta wuxuu layahay heshiis. Hadii shalay uu dastuur cusub
sameystay, maanta asaga burinaya. Shalay hadii sanad la doortay, maanta asagaa sadex sano ku arsanaya. Shalay hadii uu magacaabay hebel, maanta asagaa ka qaadaya jagada. Shalay haddaa raacsanayd asaga waxaad ahayd nin danta oomaaliyeed jecel, maanta haddaa tiraahdo waa qaldantahay waxaa tahay cadowga umadda Soomaaliyeed. Shalay hadaa isku reer ahaydeyn, maanta waxaa tihiin kala laf, beritana kala jilib, saadanbana kala hooyo, saakuuna asagaa curadkii ah.
Meel walba oo Soomaaliya haka taliyee wuxuu sheegtaa in umadda soomaaliyed ay soo dooratay, asagaana ah ninkii keeni lahaa nabadgelyo, dowlad wanaaagsan, dhaqaale horumarsan iwm. sidaa daraadeedna uu jagada uhayo. Marxalada siyaasadeed ee dalka iyo shacbiga soomaaliyeed oo aad uraba ayaa ku qasabay inuu jagada qabto sidaas dara
Previous PostXikmada quraankaNext PostProgramming language